shaqaalaha uurka leh
Hoyga shaqaalaha uurka leh waa hagaajinta shaqada sida nasasho badan ama waajibaad fudud oo u oggolaanaya haweenka uurka leh inay shaqadooda u qabsadaan si badbaado leh, iyada oo aan khatar gelinayn caafimaadkooda ama caafimaadka ilmahooda.
Waxay siisaa faa'iido shaqaale iyada oo aan-ama qiimo jaban ahayn loo-shaqeeyaha
Waxay dhimaysaa kharashka daryeelka caafimaadka
Waxay hoos u dhigtaa kharashaadka dacwada
Waxay kordhisaa kala duwanaanshaha
Badbaadada ayay kordhisaa
Waxay kordhisaa dadaalka iyo qanacsanaanta shaqaalaha
Waxay wanaajisaa caafimaadka hooyada iyo badbaadada waxayna hoos u dhigtaa khatarta dhicinta
Taageerada uurku waxay dhalisaa mahadnaq ka dhex jirta shaqaalaha oo dheellitiraya tixgelinta caafimaadka iyo shaqada
Warshadaha ay haweenku ku badan yihiin, halkaasoo shaqaaluhu ay u dhexeeyaan 25 iyo 45 sano jir, Padilla waxay khibrad u leedahay socodka hoyga uurka.
"Toddobaadkan keliya, shaqaale ayaa noo sheegay inay u baahan tahay inay fasax ku baxdo saddex toddobaad laga bilaabo maalinta xigta," ayuu yidhi Kara Amit, Madaxweyne Ku-xigeenka Khayraadka Aadanaha. "Waxay leedahay uur 8 toddobaad ah, way xanuunsan tahay mana awoodin inay shaqeyso."
Shaqaalaha u baahan hoyga uurka waxay la kulmaan Armit si ay ugala hadlaan ikhtiyaarkooda. Waxay ka caawisaa inay go'aamiyaan waxa sida ugu wanaagsan ugu shaqayn doona xaaladdooda gaarka ah. Si aad fasaxa uga qaadato shaqaalaha uurka leh waxay isticmaali karaan naafo gaaban, fasax ama xanuun, ama fasax lacag la'aan ah. Waxay sidoo kale raaci karaan jadwal la dhimay, haddii ay doorbidaan inay sii wadaan shaqada.
Markii Kristen Spargo ay gashay foosha kahor 31 toddobaad iyada oo mataano ah, maamulaha markaa ee Padilla's daryeelka caafimaadka ayaa isbitaal la dhigay shan maalmood. Mahadsanid, dhakhaatiirteedu waxay awoodeen inay joojiyaan fooshu inay sii socoto, waxayna ku soo noqotay gurigeeda si adag oo sariir ah.
"Padilla waxay ii ogolaatay inaan meel fog ka shaqeeyo wakhti taasi aanay caadi ahayn," Spargo ayaa tidhi. "Dabacsanaantu waxay ka dhigan tahay inaan u hoggaansami karo talooyinka dhakhtarkayga, anigoo siinaya dhallaankayga shan toddobaad oo kale ka hor dhalmada - mana ahayn inaan gooyo fasaxa umusha. Ilaa maanta, 13 sano ka dib, aad ayaan uga mahadcelinayaa taageeradooda."
Armit wuxuu kaloo helaa shaqaaluhu inay qadariyaan hoyga inta ay uurka leeyihiin. Xaalado badan, sidoo kale way nafiseen, maadaama ay rabaan inay sii wataan shaqadooda ugu fiican.
"Aragtida dugsigii hore waxay ahayd in dumarku aanay soo laabanayn ka dib markay dhaleen," ayuu yidhi Armit. Laakiin taasi maaha waxa aan aragno. Shaqaalaheennu waxay inta badan ku faraxsan yihiin inay soo noqdaan, waxaanan rabnaa inay dareemaan wanaag ku saabsan shaqadooda iyo shirkadda."
Deegaanka hadda jira, sii haynta shaqaalaha ayaa si gaar ah muhiim u ah.
"Waa aragti gaaban in halis loo galo inay lumiyaan shaqaale dumar ah oo waxqabad sare leh, aadka u hufan inta lagu jiro xilligan xasaasiga ah - iyo ku-meel-gaarka - waqtiga noloshooda," ayuu yiri Armit. "Xaqiiqdii, haddii aadan rabin inaad bixiso dabacsanaan guud ahaan, waxaad lumin doontaa tayada. Shaqaale badan oo badan ayaa raadinaya inay gaadhaan isku dheelitirnaanta shaqada iyo nolosha."
Goobta: Minneapolis, MN
Warshadaha: Xiriirka Dadweynaha
Kulliyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Dhallaanka iyo Dhakhaatiirta Haweenka. Abriil 2018
Iskaashiga Qaran ee Haweenka iyo Qoysaska. "Dhageysiga Hooyooyinka: Waayo-aragnimada laga filayo iyo Hooyooyinka Cusub ee goobta shaqada." 2014
Kittroeff, Natalie iyo Jessica Silver-Greenberg. "Takoorka Uurka Ayaa Ku Baahsan Gudaha Shirkadaha Ugu Weyn America." The New York Times. Juun 15, 2018